Daily Horoscope Archives - Page2of4- Lifestyle Myanmar
Home Category Lifestyle Daily Horoscope
၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာအတွက် တရုတ်ရိုးရာ ဇာတာခွင် (ရာသီခွင်အားလုံးအတွက်)
အလုပ်အကိုင်ဇာတာခွင်နှင့် အလုပ်နက္ခတ်ဗေဒင်က ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေအတွက် အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့ အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပြီး ကြိုးစားအလုပ်လုပ်လိုတဲ့ ကရကဋ်ကဲ့သို့သော ရာသီဖွားတွေအတွက်တောင် အလုပ်တစ်ခု လိုက်ရှာရခြင်းက ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်က ကရကဋ်ရာသီဖွားဆိုရင် ဘယ်အလုပ်က ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက ကရကဋ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ? တာဝန်ယူမှုက ဒီရာသီခွင်အတွက် အရေးကြီးသော ဦးစားပေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ...
တစ်ချို့သောရာသီခွင်တွေရဲ့ လိုချင်တဲ့အရာနှင့် လိုအပ်တဲ့အရာများ
လူတိုင်းဟာ မတူကြဘူး ။ သဘာဝအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေဟာလည်း ကွဲပြားကြပါသေးတယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေက သင့်အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ သင့်ရဲ့ ရာသီခွင်တွေအရလည်း သင့်ဘဝရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေနှင့် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ခွဲခြားနားလည်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကနေ့မှာ သင့်ရဲ့ ရာသီခွင်အရ သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေနှင့် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ၁။ Aries လိုချင်တဲ့အရာ...
သင့်ရာသီခွင်အရ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ သင်ဟာ ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲ?
ရာသီခွင်တွေတိုင်းမှာ ထူးခြားချက်တွေ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့ သူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားကိုပြောပြချင်တာပါ။ မှန် မမှန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်. Aries သင်ဟာ ရုံးထဲမှာအခက်ခဲဆုံးအကြိုးစားဆုံးအလုပ်လုပ်သူတတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စီမံကိန်းမပြီးဆုံးသည်အထိ သင်ဘယ်တော့မှအနားယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကို သင်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသမျှထဲကို ထည့်သွင်းပစ်လိုက်တယ်။ Taurus သင်ကအသင်းအဖွဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ Teamကို အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးလိုပါတယ်။ သင်က အကူအညီလိုသူ မည်သူမဆိုတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမဆို စျေးကိုင်တာ ချေတာမျိုးတွေမလုပ်ပဲအတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။...
Cancer ( ကရကဋ် )ရာသီဖွားတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာများ
ဇွန်- ၂၁ ကနေ ဇူလိုင်- ၂၂ မှာမွေးဖွားတဲ့ ကရကဋ်ရာသီဖွားတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ ကြံ့ခိုင်တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်၊ သစ္စာရှိတယ်၊ စိတ်ခံစားမှုကောင်းတယ်၊ စာနာသနားစိတ်ရှိတယ်။ အားနည်းချက်တွေကတော့ စိတ်ခံစားမှုကို တအားဦးစားပေးတယ်၊ သံသယများတယ်၊ ဘယ်ကိုဘဲသွားသွား ဘေးအန္တရာယ်မကင်းသလို ခံစားရတယ် ။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေကတော့ အနုပညာ၊ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများ၊ ရေနဲ့ နီးစပ်တဲ့(ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ မြစ်ကမ်းပါး၊ ချောင်းကမ်းပါး) နေရာတွေမှာ...
သင့်ရာသီခွင်အရ RSတစ်ခုမှာ သင်ဘာတွေကို စိုးရိမ်နေတတ်လဲ?
ရာသီခွင်တွေတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာ ရာသီခွင်ဖွားတွေရဲ့ Relationshipတစ်ခုမှာ သူတို့စိုးရိမ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြချင်တာပါ။ Aries ကိုယ်ချစ်ရသူက နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ကို စွန့်ခွာသွားမှာကို စိုးရိမ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်နေတာကို သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံဖွင့်ဟရမှာကို ပိုစိုးရိမ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ သူတို့က ချစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာ အရမ်းကြောက်တဲ့သူတွေပါ။ Taurus Taurusတွေက သူတို့ချစ်သူက ရည်းစားဟောင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ချစ်သူဟောင်းကိုမမှီမှာ ချစ်သူဟောင်းလောက် ရင်ခုန်စရာမကောင်းမှာ...
Leoရာသီခွင်ဖွားတွေဘေးမှာ ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ
သင့်ဘဝမှာ Leo(July 23.August 22) တွေနဲ့တွေ့ဖူးလား? သူတို့က ခန့်မှန်းရခက်သလောက် အလွန်တရာမှ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့။ တကယ်လို့ Leoတွေနဲ့ပက်သက်ရမယ် ကိုယ်ချစ်ရသူကိုယ်တိုင်က Leoရာသီခွင်ဖွား ဖြစ်နေတယ်ဆို သူတို့ဘေးနားမှာ ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်, တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကဲဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်. "အဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတာခုရပ်လိုက်" Leoရာသီခွင်ဖွားတွေနဲ့စကားတော်တော်များတတ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ရင်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ သူတို့ကို "အဲ့ဒီအကြောင်းပြေ ာနေတာခုရပ်လိုက်"ဆိုတဲ့...
သင်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်က သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိ (သို့) တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းကို ပိုကြိုက်နေမလားဆိုတာ ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ လက်တွဲဖော်ရှာဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက သင့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မြဲအောင် နေ့တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်နေရပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်မြဲခြင်း မတည်မြဲခြင်းဆိုတာက relationship အပေါ် ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့အမြင်တွေမှာလည်း များစွာမူတည်ပါတယ်။ လူတစ်ချို့က အချစ်ဆိုတာ သူတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူတွေအတွက်ကတော့...
အစပိုင်းမှာတော့ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ရပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူတွေမှာ အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲ?ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေများလာလို့ သုတေသနတွေကလေ့လာပီးရင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ 11:11မှာ ထူးခြားတဲ့သဘာဝလွန်စွမ်းအင်တွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ဝိညဉ်ရေးရာသတင်းစကားနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ရတာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ 11:11ကို ဝိညဉ်ရေးရာနိုးထမှု လို့ဆိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော ဒီဂဏာန်းတွေကို မြင်ဖူးလား? မကြာခနမြင်နေရပြီဆို အဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး? ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. 11:11ကိုမကြာခနနေရာအနှံ့မှာတွေ့မြင်တတ်ခြင်း 11:11ကိုမကြာခနတွေ့တွေ့နေတတ်ခြင်းက သင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သဘာဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ် သို့ သင်နဲ့အတိတ်ဘဝကနီးစပ်ခဲ့တဲ့ ဝိညဉ်တွေက အရေးပါတဲ့မက်ဆေ့တစ်ခုခုကိုပြချင်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကသင်အဲ့ဒါကိုသိအောင် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေရင် 111ဆိုတဲ့ဂဏန်းကိုမြင်အောင်...
သင့်ရာသီခွင်အရ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် သင်အသည်းကွဲရလိမ့်မလဲ?
ရာသီခွင်တွေတိုင်းမှာ သူ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အပြစ်အနာဆာတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ အဲ့ဒီလို အားနည်းချက်တွေကြောင့် ကိုယ့်ဘေးနားက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကို စွန့်ပစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။ ပြောရရင် အသဲကွဲရတတ်ပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာ သင့်ရာသီခွင်အရ ဘယ်လိုအရာတွေက သင့်အသည်းကို ခွဲသွားနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြချင်တာပါ။ကဲ..ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်,, Aries (March 21 – April 19) သူတို့လေးတွေက ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကြင်နာတာ...
သင့်အကြောင်းတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ ရုပ်ပုံ (၇) ပုံ
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ကို ကူညီနိုင်မယ့် စမ်းသပ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ဖော်ပြပေးမယ့်ပုံတွေကို အနားယူဖို့၊ သက်တောင့်သက်သာနဲ့သာ ကြည့်ပါ။ သင်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာတွေက မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုဖို့နှင့် ရလဒ်တွေကို ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စလိုက်ကြရအောင်။ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စစ်ဆေးချင်ရင် ပုံထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပါ ၁။ သင့်မှာ မိတ်ဆွေများများမရှိဘူး။ သို့ပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။...